Faritra 22: 10 isan’andro ireo voatily ho mitondra ny VIH/Sida | NewsMada
Faritra 22: 10 isan’andro ireo voatily ho mitondra ny VIH/Sida
1% ny tahan’ny olona mitondra ny tsimokareina VIH/Sida amin’izao fotoana izao, araka ny fanazavan’ny tomponandraikitry ny fikambanana Association serasera Fanantenana, omaly teny Alarobia.
Ahitana ny tsimokaretina avokoa ny faritra 22 ary tsy manavaka fa voafaoka ao daholo ny lahy sy ny vavy amin’ny salan-taona rehetra. Misongadina kokoa fa ny vehivavy no maro anisa voatily ho mitondra ny tsimokaretina raha mitaha amin’ny lehilahy satria mazoto manao fitiliana ny toe-pahasalamany izy ireo.
Efa miseho miandalana ny olona mitondra ny tsimokaretina, manaraka fitsaboana ny ankamaroan’ny olona mitondra ny tsimokaretina. Vokany, efa mihena ny isan’ny marary noho ny fitondrana ny tsimokaretina satria maimaimpoana ny fahazoana fanafody.
Avy amin’ny filiana natao, nanomboka ny volana janoary lasa teo, olona 10 isan’andro no voatily fa mitondra ny tsimokaretina VIH/Sida.
Raha miohatra ny tamin’ny taon-dasa, mihamitombo ny olona mitondra ny tsimokaretina eto Madagasikara. Antony matetika voalaza ny fanaovana firaisana ara-nofo tsy voaaro, ny fampiasana fitaovana tsy voadio, ohatra, rehefa mandeha any amin’ny mpitsabo nify na koa rehefa hiteraka ho an’ny vehivavy. « Mila hamafisina koa ny fanentanana sy ny fanabeazana ny ray aman-dreny sy ny zanaka », hoy ny tomponandraikitra ao amin’ny association, Rakotonirina Emmanuel na i Solo.
Mila fifampiresahana ny ray aman-dreny sy ny zanaka amin’izao firoboroboan’ny teknolojia izao, tsy ho roboka amin’ny firaisana ara-nofo aloha loatra ny tanora. Tokony handray andraikitra koa momba ny ady amin’ny tsimokaretina VIH/Sida ny mpitondra firenena raha tiana hahomby ny asa rehetra. Efa lasa mivaha ny fanentanana momba ny tsara ho fantatra amin’ny fiarovantena sy ny fomba fifindran’ny tsimokaretina.